”Maanta ajnabigu Torino metelaad ayay ku leeyihiin!” – Wiil Soomaali ah oo ka mid noqday Xildhibaannada Torino (Dhegeyso waraysi uu siiyey Hadalsame) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Maanta ajnabigu Torino metelaad ayay ku leeyihiin!” – Wiil Soomaali ah oo...
”Maanta ajnabigu Torino metelaad ayay ku leeyihiin!” – Wiil Soomaali ah oo ka mid noqday Xildhibaannada Torino (Dhegeyso waraysi uu siiyey Hadalsame)
(Torino) 19 Okt 2021 – Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa 20 sanadood kaddib noqday ajnabigii ugu horreeyey ee ka mid noqda Xildhibaannada Golaha Degaanka Torino kaddib markii uu sidoo kale noqday ajnabigii ugu codka badnaa.
Cabdullaahi oo sidoo kale ah gayfane u dhaqdhaqaaqa dadka qaxootiga ah ee ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa 15 sanadood ku sugnaa Talyaaniga, isagoo Somalia kasoo tegey 2007, isagoo Maarso kasoo degey gasiiradda Lampadusa ee Talyaaniga.
Cabdalla oo ka sharaxnaa Xisbiga liberaalka ah ee Partita Democratico oo sidoo kale ku guulaystey magaalooyinka Roma, Milano, Torino, Napoli, iyo Bologna, islamarkaana helay 1112 cod ayaa sheegay in sidoo kale uu soo baxay wiil kare oo ka socda Geeska oo u dhashay dalka Eritrea, kaasoo kasoo baxay magaalada Bologna, balse aanu jirin Soomaali kale oo soo baxay.
Sawirrada waxaa ka wada muuqda Brando Benifei oo ah hogaamiyaha xildhibaanada Baarlamanka Yurub kana tirsan Xisbiga Dimoqradiga (PD) iyo Cabdullaahi oo wada ololaynaya.
Halkan hoose ka dhegeyso waraysi uu siiyey Hadalsame Media, isagoo ku sugan magaalada Torino.
Previous articleMuran ku saabsan cudurka Covid-19 oo ka dhashay geeridii Jen. Colin Powell (Sharraxaad la bixiyey)
Next articleTOOS u daawo: Club Brugge vs Man City – LIVE (Shaxda Sugan)